သတင်း - ဖိုက်ဘာမှန်အကွေ့အကောက်နည်းပညာ - ၁
filament winding ဖြစ်စဉ်သည် resin matrix ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကွေ့အကောက်များသော၊ ပုံစံအကွေ့အကောက်၊ လေအကွေးနှင့်အကွေးအကွေ့အကောက်များ ဟူ၍ သုံးမျိုးရှိပါသည်။ နည်းလမ်းသုံးမျိုးသည်ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာများရှိပြီးစိုစွတ်သောအကွေ့အကောက်များသောနည်းလမ်းသည်၎င်း၏အတော်လေးရိုးရှင်းသောပစ္စည်းလိုအပ်ချက်များနှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစရိတ်နည်းသောကြောင့်အသုံးများဆုံးဖြစ်သည်။
ရှုထောင့်အကွေ့အကောက်များသောလုပ်ငန်းစဉ်သည်သစ်စေးကိုအခြေခံပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်သည့်အဓိကလုပ်ငန်းစဉ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ထိန်းချုပ်တင်းမာမှုနှင့်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောမျဉ်းပုံသဏ္conditionန်၏အခြေအနေအောက်၌အစေးကော်နှင့်ဖုံးအုပ်ထားသောအဆက်မပြတ်ဖိုင်ဘာအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ၎င်းနောက်အဆက်မပြတ်တစ်ပုံစံတည်းနှင့်ပုံမှန်အမာခံမှို (သို့) အမာရွတ်တွင်ဒဏ်ရာရသည်။ ပတ် ၀ န်းကျင်သည်ပုံသဏ္န်အမျိုးမျိုးရှိထုတ်ကုန်များအတွက်ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းပုံသွင်းနည်းလမ်းဖြစ်လာရန်။ filament အကွေ့အကောက်များသောပုံသွင်းလုပ်ငန်းစဉ် ၁-၁ ။
အကွေ့အကောက်များသောပုံစံသုံးမျိုးရှိသည် (ပုံ ၁-၂): hoop winding, plane winding နှင့် spiral winding hoop- ဒဏ်ရာအားဖြည့်ပစ္စည်းသည် mandrel ၏ဝင်ရိုးနှင့် ၉၀ ဒီဂရီ (ပုံမှန်အားဖြင့် ၈၅-၈၉ ဒီဂရီ) အနီးရှိထောင့်၌အဆက်မပြတ်ဒဏ်ရာရှိသည်။ အတွင်းဘက်လမ်းကြောင်းသည်အမာခံမှိုတွင်အဆက်မပြတ်ဒဏ်ရာဖြစ်ပြီး spirally ဒဏ်ရာအားဖြည့်သည့်အရာသည်အမာခံမှို၏အစွန်းနှစ်ဘက်တွင် tangent ရှိသည်။
filament winding နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်အားဖြည့်ပစ္စည်းများ၊ အစေးစနစ်များနှင့်နည်းပညာတီထွင်မှုများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အနီးကပ်ဆက်စပ်နေသည်။ ဟန်မင်းဆက်တွင်ရှည်လျားသောဝါးပိုးနှင့် hoop ပိုးတို့ဖြင့်ရှည်လျားသောသစ်သားတိုင်များကိုထိမ်ထားသည့်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုရှိသော်လည်း Ge, Halberd စသဖြင့်ရှည်လျားသောလက်နက်တိုင်များပြုလုပ်ရန် ၁၉၅၀ ခုနှစ်များအထိမဖြစ်ခဲ့ပါ။ လုပ်ငန်းစဉ်သည်အမှန်တကယ်ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သည့်နည်းပညာဖြစ်လာသည်။ မရ။ ၁၉၄၅ ခုနှစ်တွင်နွေ ဦး မဲ့ဘီးဆိုင်းကိုအောင်မြင်စွာထုတ်လုပ်ရန် filament winding နည်းပညာကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ၁၉၄၇ ခုနှစ်တွင်ပထမဆုံးချည်မျှင်အကွေ့အကောက်စက်ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ကာဘွန်ဖိုင်ဘာနှင့် aramid ဖိုင်ဘာကဲ့သို့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်အမျှင်များနှင့် microcomputer ထိန်းချုပ်ထားသည့်အကွေ့အကောက်များသောစက်များပေါ်ပေါက်လာခြင်းနှင့်အတူစက်မှုချည်ထည်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာမြင့်မားသောချည်မျှင်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည်လျင်မြန်စွာတိုးတက်လာသည်။ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောနယ်ပယ်အားလုံးကိုအသုံးချခဲ့သည်။
အကွေ့အကောက်များစဉ်တွင်အစေးပုံစံ matrix ၏ကွဲပြားသောဓာတုဗေဒနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများအရအကွေ့အကောက်များသောလုပ်ငန်းစဉ်များကိုအခြောက်၊ အစိုနှင့်တစ်ပိုင်းခြောက်
ခြောက်သွေ့သောအကွေ့အကောက်များသောကြိုချည်ထားသောချည်တိပ်ကို အသုံးပြု၍ အဆင့် B တွင်ရှိသည့် prepreg တိပ်ကိုအထူးစက်ရုံ (သို့) အလုပ်ရုံတွင်ထုတ်လုပ်သည်။ ခြောက်သွေ့သောအကွေ့အကောက်၌ prepreg တိပ်သည်အပူမှိုကိုအမာခံမှိုပေါ်သို့မတင်မီအကွေ့အကောက်များသောစက်ပေါ်တွင်ပျော့ပျောင်းရန်လိုသည်။ ကော်ပါဝင်မှု၊ တိပ်ခွေအရွယ်အစားနှင့် prepreg တိပ်၏အရည်အသွေးတို့ကိုအကွေ့အကောက်မခံမီစစ်ဆေးပြီးမှထုတ်ကုန်၏အရည်အသွေးကိုပိုမိုတိကျစွာထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ခြောက်သွေ့သောအကွေ့အကောက်များ၏ထုတ်လုပ်မှုထိရောက်မှုသည်မြင့်မားသည်၊ အကွေ့အကောက်မြန်နှုန်းသည် ၁၀၀-၂၀၀ မီတာ/မိနစ်သို့ရောက်ရှိနိုင်ပြီးအလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်သည်သန့်ရှင်းသည်။ သို့သော်ခြောက်သွေ့သောအကွေ့အကောက်များသောပစ္စည်းများသည်ပိုမိုရှုပ်ထွေးပြီးစျေးကြီးသည်၊ ဒဏ်ရာထုတ်ကုန်၏ interlayer ဖြတ်တောက်မှုသည်လည်းနည်းပါးသည်။
Wet winding သည်အမျှင်များစုစည်းရန်၊ ကော်၌နှစ်ပြီး၊ တင်းအားထိန်းချုပ်မှုအောက်ရှိအမာခံမှိုများပေါ်တွင်တိုက်ရိုက်လေတိုက်ပြီးခိုင်မာအောင်ပုံသွင်းသည်။ စိုစွတ်သောအကွေ့အကောက်များသောကိရိယာများသည်အတော်လေးရိုးရှင်းပါသည်၊ သို့သော်တိပ်သည်ချက်ချင်းဒဏ်ရာရရှိသောကြောင့်အကွေ့အကောက်များသောကာလအတွင်းထုတ်ကုန်၏ကော်ပါဝင်မှုကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့်စစ်ဆေးရန်ခက်ခဲသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကော်၌ပျော်ဆေးသည်အစိုင်အခဲဖြစ်သောအခါထုတ်ကုန်၌ပူဖောင်းများနှင့်ချွေးပေါက်ကဲ့သို့ချို့ယွင်းချက်များဖြစ်စေရန်လွယ်ကူသည်။ အကွေ့အကောက်များ၊ တင်းအားသည်ထိန်းချုပ်ရန်မလွယ်ကူပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်အလုပ်သမားများသည်အရည်ပျော်အငွေ့ပျံများနှင့်အမျှင်တိုများပျံသန်းနေသည့်ပတ်ဝန်းကျင်၌အလုပ်လုပ်ကြပြီးအလုပ်အခြေအနေများမှာညံ့ဖျင်းသည်။
စိုစွတ်သောဖြစ်စဉ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကတစ်ပိုင်းခြောက်သွေ့သောဖြစ်စဉ်သည်အမှိုမှအမျှင်များမှကွေ့ကောက်သောအမာခံမှိုသို့သွားရာလမ်း၌အခြောက်ခံပစ္စည်းအစုံကိုထည့်သွင်းသည်။ ခြောက်သွေ့သောနည်းလမ်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် semi-dry method သည်ရှုပ်ထွေးသော prepreg လုပ်ငန်းစဉ်သုံးပစ္စည်းကိရိယာအပြည့်အစုံကိုအားမကိုးပါ။ ထုတ်ကုန်၏ကော်ပါဝင်မှုသည်လုပ်ငန်းစဉ်၌စိုစွတ်သောနည်းလမ်းအဖြစ်တိကျစွာထိန်းချုပ်ရန်ခက်ခဲသော်လည်း၊ စိုစွတ်သောနည်းလမ်းထက်အလယ်အလတ်အခြောက်ခံပစ္စည်းတစ်ခုအပိုဆောင်းရှိသော်လည်းအလုပ်သမားများ၏လုပ်အားသည်ပိုမိုကြီးမားသော်လည်းချို့ယွင်းချက်များဖြစ်သော ထုတ်ကုန်ရှိပူဖောင်းများနှင့်ချွေးပေါက်များသည်အလွန်လျော့နည်းသွားသည်။
နည်းလမ်းသုံးမျိုးသည်ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာများရှိပြီးစိုစွတ်သောအကွေ့အကောက်များသောနည်းလမ်းသည်၎င်း၏အတော်လေးရိုးရှင်းသောပစ္စည်းလိုအပ်ချက်များနှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစရိတ်နည်းသောကြောင့်အသုံးများဆုံးဖြစ်သည်။ အကွေ့အကောက်များသောနည်းလမ်းသုံးခု၏အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကိုဇယား ၁-၁ တွင်နှိုင်းယှဉ်ထားသည်။
1. FRP သိုလှောင်ကန်
အယ်လ်ကာလီ၊ ဆား၊ အက်ဆစ်စသည့်ဓာတုအဆိပ်သင့်အရည်များသိုလှောင်ခြင်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ သံမဏိကန်များသည်ပုပ်လွယ်ခြင်းနှင့်ယိုစိမ့်ခြင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုသက်တမ်းသည်အလွန်တိုတောင်းသည်။ သံမဏိသို့ပြောင်းရန်ကုန်ကျစရိတ်သည်ပိုမြင့်ပြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုသည်ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများကဲ့သို့မကောင်းပေ။ ဖိုက်ဘာ-ဒဏ်ရာရှိသောမြေအောက်ရေနံဖန်ထည်ဖန်မျှင်အားဖြည့်ပလပ်စတစ်သိုလှောင်ကန်သည်ရေနံယိုစိမ့်မှုကိုကာကွယ်ပေးပြီးရေအရင်းအမြစ်ကိုကာကွယ်နိုင်သည်။ နှစ်ထပ်နံရံပေါင်းစပ် FRP သိုလှောင်ကန်များနှင့် filament winding လုပ်ငန်းစဉ်များဖြင့်ပြုလုပ်သော FRP ပိုက်များကိုကျယ်ပြန့်စွာဓာတ်ဆီဆိုင်များတွင်အသုံးပြုခဲ့သည်။
2. FRP ပိုက်များ
ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်ပိုက်များကိုကုန်ပစ္စည်းများတွင်ရေနံချက်စက်ရုံများ၊ petrochemical anticorrosive ပိုက်များ၊ ရေပိုက်များနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းများတွင်သူတို့၏မြင့်မားသောခိုင်ခံ့မှု၊ ကောင်းမွန်မှု၊ ကောင်းမွန်ပြည့်စုံသောစွမ်းဆောင်ရည်၊ အကျိုးရှိသောစက်မှုထုတ်လုပ်မှုအောင်မြင်ရန်လွယ်ကူပြီးအလုံးစုံလည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်များကြောင့်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုကြသည်။ နှင့်အစိုင်အခဲအမှုန်များ (ယင်ပြာနှင့်ဓာတ်သတ္တုများကဲ့သို့) သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပိုက်လိုင်းများစသည်။
3. FRP ဖိအားထုတ်ကုန်များ
filament winding process သည် FRP ဖိအားအိုးများ (စက်လုံးများအပါအဝင်) နှင့် FRP ဖိအားပိုက်များ (ပြည်တွင်းဖိအား၊ ပြင်ပဖိအား (သို့) နှစ်ခုစလုံး) ကိုထုတ်လုပ်ရန်သုံးနိုင်သည်။
FRP ဖိအားခံရေယာဉ်များကိုအများအားဖြင့်စစ်ဘက်သုံးစက်မှုလုပ်ငန်းများဖြစ်သောအစိုင်အခဲရော့ကက်အင်ဂျင်ခွံများ၊ အရည်ပစ်ဒုံးအင်ဂျင်အင်ဂျင်ခွံများ၊ FRP ဖိအားခံသင်္ဘောများ၊ နက်ရှိုင်းသောရေဖိအားပြင်ပခွံများစသည်ဖြင့် FRP ထုပ်ပိုးထားသောဖိအားပိုက်များသည်အရည်နှင့်ဓာတ်ငွေ့များဖြင့်ပြည့်စေလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ပင်လယ်ရေမှသန့်စင်သော reverse osmosis ပိုက်များနှင့်ဒုံးပျံပစ်လွှတ်သည့်ပိုက်များကဲ့သို့ဖိအားအချို့ကြောင့်ယိုစိမ့်ခြင်းသို့မဟုတ်ပျက်စီးခြင်း အဆင့်မြင့်ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများ၏ထူးခြားသောဝိသေသလက္ခဏာများသည်ယခုနှင့်အနာဂတ်တွင်အင်ဂျင်တည်ဆောက်မှု၏အဓိက ဦး တည်ချက်ဖြစ်လာသော filament winding ဖြစ်စဉ်မှပြင်ဆင်ထားသောအမျိုးမျိုးသောဒုံးပျံအင်ဂျင်ခွံများနှင့်လောင်စာကန်များကိုအောင်မြင်စွာအသုံးချနိုင်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့တွင်အချင်းအနည်းငယ်စင်တီမီတာသေးငယ်သည့်သဘောထားထိန်းညှိနိုင်သောအင်ဂျင်အိမ်များနှင့်အချင်း ၃ မီတာအထိကြီးမားသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဒုံးပျံများအတွက်အင်ဂျင်အိမ်များပါ ၀ င်သည်။
a) လေပူဖောင်းများသည်လုံး ၀ မလွင့်ပါ၊ ပြန့်နှံ့ခြင်းနှင့်အကွေ့အကောက်များသောအလွှာတစ်ခုစီကို roller ဖြင့်အကြိမ်ကြိမ်လှိမ့်ပေးရမည်။ roller ကိုစက်ဝိုင်းပုံစံ zigzag အမျိုးအစား (သို့) longitudinal groove အမျိုးအစားအဖြစ်ပြုလုပ်သင့်သည်။
မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်စေ delamination ကိုဂရုမပြုဘဲ၊ delamination ကိုသေချာစွာဖယ်ရှားပစ်ရမည်၊ ချွတ်ယွင်းချက်ဧရိယာ၏အပြင်ဘက်ရှိအစေးကိုထောင့်ကြိတ်စက် (သို့) အရောင်တင်စက်ဖြင့်ပွတ်ရမည်၊ အကျယ်သည် ၅ စင်တီမီတာထက်မနည်းစေရ လုပ်ငန်းစဉ်လိုအပ်ချက်။ ကြမ်းပြင်။
အကြောင်းရင်းများ၊ tape တိပ်၏ပမာဏသည်အလွန်သေးငယ်သည်သို့မဟုတ်မညီမညာဖြစ်နေသည်။ roller ပူသော roller ၏အပူချိန်သည်နိမ့်လွန်းသည်၊ အစေးသည်ကောင်းစွာအရည်ပျော်မသွားပါ၊ တိပ်သည်အမာခံကိုကောင်းစွာမကပ်နိုင်ပါ။ the တိပ်၏တင်းအားသည်သေးငယ်သည်။ o အဆီထုတ်လွှတ်မှုပမာဏသည်အမာခံထည်ကိုအစွန်းအထင်းများလွန်းစေသည်။
ဖြေရှင်းချက် - ကော်အထည်၏ကော်ပါဝင်မှုနှင့်ပျော်ဝင်အစေး၏ကော်ပါဝင်မှုသည်အရည်အသွေးလိုအပ်ချက်နှင့်ပြည့်စုံရမည်။ roller ပူသော roller ၏အပူချိန်ကိုကော်ပိုစ့်မှပူနွေးသော roller ထဲသို့ဖြတ်သွားသောအခါကော်အထည်သည်ပျော့ပြီးစေးကပ်လာပြီးပြွန်အမာခံကိုခိုင်မြဲစွာထိန်းထားနိုင်သည်။ tape တိပ်၏တင်းအားကိုထိန်းညှိပါ။ o အဆီထုတ်လွှတ်သည့်ဆေးကိုမသုံးပါနှင့်၎င်း၏ဆေးပမာဏကိုလျှော့ချပါ။
ဖြေရှင်းချက်: စစ်ဆင်ရေးကိုအာရုံစိုက်ပါ၊ ခေါင်းဆောင်ထည်ကိုတင်းကျပ်စွာနှင့်အမာခံပေါ်တွင်တင်ပါ။
FRP ကိုဆေးကြောပြီးအမြှုပ်ထစေသောအဓိကအကြောင်းအရင်းမှာပြွန်၏မတည်ငြိမ်သောပါဝင်မှုသည်ကြီးလွန်းခြင်း၊ လှိမ့်ခြင်းအပူချိန်သည်နိမ့်ခြင်းနှင့်လှိမ့်ခြင်းမြန်ခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ မရ။ ပြွန်ကိုအပူပေးပြီးအစိုင်အခဲလုပ်သောအခါ၎င်း၏ကျန်ရှိသော volatiles များသည်အပူနှင့်အတူဖောင်းလာပြီးပြွန်ကိုပူဖောင်းဖြစ်စေသည်။
ဖြေရှင်းချက် - တိပ်၏မတည်ငြိမ်သောအကြောင်းအရာများကိုထိန်းချုပ်ပါ၊ လှိမ့်သောအပူချိန်ကိုသင့်လျော်စွာတိုးစေပြီးလှိမ့်ခြင်းအရှိန်ကိုနှေးစေသည်။
ဆေးကြောပြီးနောက်ပြွန်၏အရေးအကြောင်းများသည်တိပ်၏ကော်ပါဝင်မှုမြင့်မားသည်။ ဖြေရှင်းချက် - တိပ်၏ကော်ပါဝင်မှုကိုသင့်လျော်စွာလျှော့ချပြီးလှိမ့်သောအပူချိန်ကိုလျှော့ချပါ။
အရည်အချင်းမရှိသော FRP သည်ဗို့အားကိုခံနိုင်သည်
အကြောင်းအရင်းများ - rolling လူးနေစဉ်တိပ်၏တင်းကျပ်မှုမလုံလောက်ခြင်း၊ လှိမ့်ခြင်းအပူချိန်နိမ့်ခြင်း (သို့) အလူးအလဲမြန်ခြင်း၊ ထို့ကြောင့်အ ၀ တ်နှင့်အထည်ကြားအချိတ်အဆက်မကောင်းခြင်း၊ ပြွန်၌ကျန်နေသေးသောပမာဏများကြီးလာခြင်း၊ tube ပြွန်သည်လုံးဝမပျောက်ပါ။
ဖြေရှင်းချက် - the တိပ်၏တင်းအားကိုတိုးပါ၊ လှိမ့်ခြင်းအပူချိန်ကိုတိုးခြင်း (သို့) လှိမ့်ခြင်းအရှိန်ကိုနှေးစေခြင်း tube ပြွန်ကိုလုံးဝပျောက်ကင်းအောင်သေချာဆေးကြောခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုညှိပါ။
၁။ သိပ်သည်းဆနည်းခြင်းနှင့်ပေါ့ပါးသောပစ္စည်းတို့ကြောင့်မြေအောက်ရေအဆင့်မြင့်သောဒေသများတွင် FRP ပိုက်များကိုတပ်ဆင်ရလွယ်ကူပြီး piers (သို့) မိုးရေစီးဆင်းမှုကဲ့သို့ရေစီးရေလာဆန့်ကျင်သောအစီအမံများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည်။
၂။ တပ်ဆင်ထားသောမှန်သံမဏိပိုက်များပေါ်တွင်ပိုက်များဖွင့်လှစ်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ပိုက်လိုင်းအက်ကြောင်းများကိုပြုပြင်ခြင်းတို့၌စက်ရုံရှိပြီးပြည့်စုံသောခြောက်သွေ့သောအခြေအနေများနှင့်ဆင်တူသည်။ ဆောက်လုပ်နေစဉ်ကာလအတွင်းအသုံးပြုခဲ့သောသစ်စေးနှင့်အမျှင်ထည်သည် ၇ အားပျောက်ကင်းရန်လိုသည်။ -၈ နာရီနှင့် on-site ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ရေးပြုပြင်ရေးသည်ဤလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်ယေဘုယျအားဖြင့်ခက်ခဲသည်။
၃။ လက်ရှိမြေအောက်ပိုက်လိုင်းရှာဖွေရေးကိရိယာများသည်အဓိကအားဖြင့်သတ္တုပိုက်လိုင်းများကိုထောက်လှမ်းသည်။ သတ္တုမဟုတ်သောပိုက်လိုင်းရှာဖွေရေးကိရိယာများသည်စျေးကြီးသည်။ ထို့ကြောင့်မြေ၌မြှုပ်နှံပြီးနောက် FRP ပိုက်များကိုရှာဖွေရန်မဖြစ်နိုင်ပေ။ အခြားနောက်ဆက်တွဲဆောက်လုပ်ရေးယူနစ်များသည်ဆောက်လုပ်နေစဉ်ကာလအတွင်းပိုက်လိုင်းကိုတူးရန်နှင့်ပျက်စီးရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။
၄။ FRP ပိုက်၏ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဆန့်ကျင်နိုင်မှုအားနည်းသည်။ လက်ရှိတွင်မျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ထားသော FRP ပိုက်များသည်၎င်း၏မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ ၀.၅ မီလီမီတာအစေးကြွယ်ဝသောအလွှာနှင့်ခရမ်းလွန်စုပ်စက် (စက်ရုံမှထုတ်ယူထားသော) တို့ဖြင့်အိုမင်းခြင်းကိုနှောင့်နှေးစေသည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှအစေးကြွယ်ဝသောအလွှာနှင့် UV စုပ်ယူပျက်စီးခြင်းတို့ကြောင့်၎င်း၏ ၀ န်ဆောင်မှုသက်တမ်းကိုထိခိုက်စေလိမ့်မည်။
၅။ မြေဖုံးလွှမ်းမှုအတိမ်အနက်အတွက်ပိုမိုမြင့်မားသောလိုအပ်ချက်များ ယေဘူယျအားဖြင့်ယေဘူယျအားဖြင့် SN5000 တန်းဖန်သံမဏိပိုက်၏ယေဘူယျအားဖြင့်မြေအောက်ရေသည် ၀.၈ မီတာထက်မနည်းပါ။ အနက်ဆုံးဖုံးလွှမ်းထားသောမြေသည် ၃.၀ မီတာထက်မပိုပါ။ SN2500 အဆင့်မှန်သံမဏိပိုက်၏တိမ်ဆုံးမြေ ၀ င်သည် ၀.၈ မီတာထက်မနည်းပါ။ အနက်ဆုံးဖုံးလွှမ်းထားသောမြေ ၀.၇ မီတာနှင့် ၄.၀ မီတာအသီးသီးရှိသည်။
၆။ backfill မြေဆီလွှာသည်ပိုက်၏အပြင်ဘက်နံရံကိုမပျက်စီးစေရန် ၅၀ မီလီမီတာထက်ပိုကြီးသောအရာများ၊ အုတ်များနှင့်ကျောက်များကဲ့သို့မပါဝင်ရပါ။
၇။ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိရေကုမ္မဏီကြီးများမှ FRP ပိုက်များအကြီးအကျယ်အသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အစီရင်ခံခြင်းမရှိပါ။ FRP ပိုက်များသည်ပိုက်အမျိုးအစားအသစ်များဖြစ်သောကြောင့် ၀ န်ဆောင်မှုသက်တမ်းကိုမသိရသေးပါ။
FRP ပိုက်သည်စဉ်ဆက်မပြတ်ဖန်မျှင်အားဖြည့် thermosetting အစေးပိုက်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အလွန်နုနယ်ပြီးပြင်ပသက်ရောက်မှုကိုမခံနိုင်ပါ။ အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်းနှင့်ပြင်ပအချက်များကြောင့်ထိခိုက်ပြီးတစ်ခါတစ်ရံယိုစိမ့်မှု (ယိုစိမ့်ခြင်း၊ ပေါက်ကွဲခြင်း) သည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုညစ်ညမ်းစေပြီးရေထိုးသည့်အချိန်ကိုထိခိုက်စေသည်။ နှုန်း။ site ပေါ်တွင်စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းပြီးနောက်ယိုစိမ့်မှုသည်အဓိကအကြောင်းအရင်းများကြောင့်ဖြစ်သည်။
၁.၁၊ FRP စွမ်းဆောင်ရည်၏သက်ရောက်မှု
FRP သည်ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်၊ အောက်ပါအခြေအနေများကြောင့်အဓိကအားဖြင့်ပစ္စည်းနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များသည်ပြင်းထန်စွာထိခိုက်သည်။
(၁) ဓာတုအစေးအမျိုးအစားနှင့်အရောင်တင်မှုအဆင့်သည်အစေး၏အရည်အသွေး၊ အစေးကိုအရောင်ဖျော့ခြင်းနှင့်အရောင်တင်အေးဂျင့်နှင့်ဖန်ဖိုင်ဘာအားဖြည့်ပလတ်စတစ်ပေါင်းစပ်ဖော်မြူလာတို့ကိုထိခိုက်စေသည်။
(၂) FRP အစိတ်အပိုင်းများ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်ဖန်ဖိုင်ဘာပစ္စည်းများနှင့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုနှင့် FRP အစိတ်အပိုင်းများ၏ရှုပ်ထွေးမှုတို့သည်အပြောင်းအလဲပြုလုပ်ခြင်းနည်းပညာ၏အရည်အသွေးကိုတိုက်ရိုက်ထိခိုက်စေသည်။ မတူညီသောပစ္စည်းများနှင့်မတူညီသောမီဒီယာလိုအပ်ချက်များသည်လည်းအပြောင်းအလဲနည်းပညာကိုရှုပ်ထွေးစေသည်။
(၃) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုသည်အဓိကအားဖြင့်ထုတ်လုပ်မှုအလယ်အလတ်၊ လေထုအပူချိန်နှင့်စိုထိုင်းဆ၏ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဖြစ်သည်။
(၄) စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းပညာအစီအစဉ်သည်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုရှိမရှိ၊ တည်ဆောက်ရေးအရည်အသွေးကိုတိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေသောစီမံချက်၏လွှမ်းမိုးမှု။
ပစ္စည်းများ၊ ၀ န်ထမ်းများ၏လည်ပတ်မှု၊ ပတ်ဝန်းကျင်လွှမ်းမိုးမှုများနှင့်စစ်ဆေးခြင်းနည်းလမ်းများကဲ့သို့သောအချက်များကြောင့် FRP ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းသွားသည်၊ ပြွန်နံရံ၏ပြည်တွင်းကျရှုံးခြင်း၊ အတွင်းနှင့်အပြင်ဘက်ရှိဝက်ခြံများတွင်မှောင်မိုက်အက်ကွဲခြင်းများရှိလိမ့်မည်။ စစ်ဆေးစဉ်နှင့်တွေ့ရစဉ်သုံးရန်သာခက်သည်။ ၎င်းသည်ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးပြဿနာတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုထင်ရှားလိမ့်မည်။
ခရီးဝေးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဖန်သံမဏိပိုက်များတင်ခြင်းနှင့်ထုတ်ခြင်းအတွက်တင်းကျပ်သောစည်းမျဉ်းများရှိသည်။ ပျော့ပျောင်းတဲ့လောက်လွှဲနဲ့ခရီးဝေးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုအသုံးမပြုရင်သစ်သားပျဉ်ပြားတွေကိုမသုံးသင့်ဘူး။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်တင်ယာဉ်၏ပိုက်လိုင်းသည်ရထားထက် ၁.၅ မီတာကျော်လွန်သည်။ ဆောက်လုပ်ရေးကိုပြန်လည်ဖြည့်နေစဉ်ပိုက်မှအကွာအဝေးသည် ၀.၂၀ မီလီမီတာဖြစ်သည်။ ကျောက်ခဲများ၊ အုတ်များ (သို့) တိုက်ရိုက်ပြန်ဖြည့်ခြင်းသည်မှန်သံမဏိပိုက်အားပြင်ပပျက်စီးစေလိမ့်မည်။ ဆောက်လုပ်နေစဉ်အတွင်းဖိအားလွန်ကဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးယိုစိမ့်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကိုအချိန်မီမတွေ့ရှိခဲ့ပေ။
ဖိအားမြင့်ရေဖြင့်ထိုးခြင်းသည်မြင့်မားသောဖိအားနှင့်တုန်ခါမှုကြီးမားသည်။ FRP ပိုက်များ: ပိုက်များကွဲခြင်းနှင့်ပေါက်ကွဲခြင်းကိုဖြစ်စေသောတွန်းအားကိုဖြစ်စေရန် axial နှင့်ဘေးတိုက်လမ်းကြောင်းများရုတ်တရက်ပြောင်းလဲသွားသောပိုက်များ။ ထို့အပြင်သံမဏိပြောင်းလဲခြင်းအဆစ်များ၊ ချိတ်ဆက်မီတာများ၊ မီတာများ၊ ရေတိုင်များ၊ ဖန်မီတာများနှင့်ဖန်သံမဏိပိုက်များဆက်သွယ်ထားသောအစိတ်အပိုင်းများတွင်ကွဲပြားသောတုန်ခါမှုပစ္စည်းများကြောင့်ဖန်သံမဏိပိုက်များယိုစိမ့်သည်။
၁.၄ ။ ဆောက်လုပ်ရေးအရည်အသွေးပြဿနာ
FRP ပိုက်များတည်ဆောက်ခြင်းသည် ၀ န်ဆောင်မှုသက်တမ်းကိုတိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းအရည်အသွေးသည်အဓိကအားဖြင့်မြှုပ်နှံထားသောဒီဇိုင်းနှင့်မကိုက်ညီခြင်း၊ အကာအကွယ်အဖုံးသည်အဝေးပြေးလမ်းများ၊ ရေနုတ်မြောင်းများစသည်ဖြင့်မ ၀ တ်ရသေးပါ။ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီဘူးထဲသို့ထည့်မထားပါ။ FRP ပိုက်များယိုစိမ့်ရခြင်းအကြောင်းရင်း။
FRP ရေထိုးပိုက်လိုင်းသည်ကျယ်ပြန့်သောဧရိယာကိုဖြတ်သန်းသည်။ အများစုမှာလယ်ယာမြေသို့မဟုတ်ရေနုတ်မြောင်းများအနီးတွင်ရှိသည်။ ဆိုင်းဘုတ်မှတ်တိုင်သည်သက်တမ်းကြာရှည်စွာခိုးယူခံရသည်။ ကျေးလက်မြို့များနှင့်ကျေးရွာများသည်နှစ်စဉ်ရေထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုအခြေခံအဆောက်အအုံများကိုဆောင်ရွက်ရန်ပိုက်လိုင်းများပျက်စီးခြင်းနှင့်ယိုစိမ့်ခြင်းများဖြစ်စေသည်။